पोखरामा फुटबलमात्र हैन् क्रिकेट पनि लोकप्रिय छ भन्ने प्रमाणित भयोः छुम्बी लामा (अन्तर्वार्ता) - खेल - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
पोखरामा फुटबलमात्र हैन् क्रिकेट पनि लोकप्रिय छ भन्ने प्रमाणित भयोः छुम्बी लामा (अन्तर्वार्ता)
पोखरा कार्तिक २१
घरेलु टोली पोखरा पल्टनले उपाधि जितेसँगै पोखरा प्रिमियर लिग(पीपीएल) टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिताको पहिलो संस्करण मंगलबार पोखरामा सम्पन्न भएको छ।
देशका ६ वटा शहरहरुको फ्रेन्चाइजी बनाउँनै आयोजना गरिएको प्रतियोगिता देशकै सर्वाधिक पुरस्कार राशीको थियो। १२ दिन चलेको प्रतियोगिताको विजेता पोखराले २७ लाख तथा उपविजेता चितवनले १० लाख नगद हात पारेको थियो।
सम्बन्धित समाचार: यस्तो छ पीपीएल फाइनलको सम्पूर्ण कहानी
प्रतियोगिता आयोजना अघि पहाडी क्षेत्र भएकाले पोखरामा क्रिकेटको त्यति लोकप्रियता थिएन, जति फुटबलको थियो। फुटबल प्रतियोगितामा पोख्रेली दर्शकहरु प्याराफिटमा खचाखच भरिएको दृश्य कसैका लागि नौलो थिएन। तर यसपटक भने त्यही फुटबल रंगशालाको छेउमै रहेको क्रिकेट मैदानमा बनाइएको अस्थायी प्याराफिटमा क्रिकेट हेर्न भरिएका पोख्रेली दर्शकहरु भने सबैका लागि नौलो थिए। पोख्रेली दर्शकहरु त्यति ठूलो संख्यामा क्रिकेट हेर्न आएको पहिलो पटक थियो।
प्रतियोगिता आयोजक क्विन्स इभेन्ट्स म्यानेजमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक छुम्बी लामाले पनि प्रतियोगितामा दर्शकको उपस्थिती आयोजकले अपेक्षा गरेभन्दा निकै बढी रहेको प्रतिक्रिया दिए। उनले पोखरामा फुटबलसँगै क्रिकेटपनि उत्तिकै लोकप्रिय भएको कुरा पीपीएलले प्रमाणित गरिदिएको बताए। प्रस्तुत छ, लामासँग नेपालखबरका यज्ञराज जोशीले प्रतियोगिताको समापनपछि गरेको कुराकानीः
समग्रमा प्रतियोगिता कस्तो रह्यो?
एकदमै उत्साहित र भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ। प्रतियोगितामा देखिएका दर्शकको उत्साह, त्यसमाथि पनि पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आएर समापन गरिदिनुभयो। साथमा युवा नेता गगन थापा तथा अन्य नेताले समापनमा आइदिनु भयो। दर्शकको उपस्थिती, मिडियाको सपोर्ट, स्थानिय सरकारको सपोर्ट, मौसमको साथ र प्रतिस्पर्धी फाइनलका कारण पीपीएल अझै रोमाञ्चक बन्यो। पहिलो दिनबाट नै अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे एकदमै क्लियर रुपमा देखिदा धेरैको मन पनि लोभियो। प्रतियोगिताको सुखद अन्त्य गर्न पाउँदा निकै खुशी छौं।
यो पनि: सन्दीपलाई ११ वर्षे सोहिलको शिक्षा
नेपाली क्रिकेटलाई पीपीएलले के दियो त?
नेपालमा जति पनि लिग भईरहेको छ, ती लिगहरुलाई ‘स्टान्र्डलाइज’ गर्दै जानुपर्छ। यो खालको प्रतियोगिता हुने हो भने खेलाडीहरुको व्यवसायिकता पनि बढ्दै जान्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि पोखरा प्रिमियर लिगले नेपाली क्रिकेटको पोटेन्सियल राम्रो छ है भनेर सन्देश दिएको छ। सबैभन्दा राम्रो त यस मैदानमा बनेको पीच र आउटफिल्ड हो। पीचमा एकदमै राम्रो रन बनेको छ र राम्रो आउटफिल्ड गज्जब छ। सबै क्षेत्रमा यो लेभलको भौतिक संरचना बन्ने हो भने नेपालमा क्रिकेटको सम्भावना असाध्यै राम्रो छ। त्यसका लागि राज्य सरकारले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रतियोगिताले दिएको छ।
पोखरा क्रिकेटलाई जुर्मुराउन पीपीएल कति सक्षम भयो?
पोखरामा क्रिकेटको माहौल बसाउने पीपीएलले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको छ। विश्वकप ट्रफी पनि पोखरामा आउँदा यहाँका क्रिकेट प्रेमीहरु अझै उत्साहित भए। ट्रफीसँग फोटो खिच्न फ्यानहरुको लाइन लागेको थियो। माछापुच्छ«ेको पृष्ठभुमीमा क्रिकेट खेलेको तस्वीरहरु संसारभर फैलिएको छ। प्रतियोगिता हेर्न आएका यहाँका मुख्यमन्त्री लगायतका प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले पनि क्रिकेटको विकासमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यसले पोखराको मात्रै नभएर देशकै क्रिकेट विकासमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको जस्तो लाग्छ।
यो पनि: एक्स्पर्ट तरिका
हामीले लगानी र मेहनत गर्दै मैदान र पीच बनाएका छौं। यो फाइदा पोखराको स्थानिय क्रिकेटरले अब उठाउँनुपर्छ। राम्रो पीच अनि मैदानमा अब उनीहरुले खेल्न पाउँछ। मैदान बनेपछि अब यहाँ स्थानियहरुले प्रतियोगिताहरु पनि आयोजना गर्न सक्छन। राष्ट्रिय टोलीको क्याम्पहरु यहाँ हुन सक्छ। काठमाडौंपछि पोखरा नेपाली क्रिकेटको बन्द प्रशिक्षणका लागि नयाँ भेन्यु तयार भएको छ। तर यसको मेन्टनमा भने जिम्मेवार निकाय सक्रिय हुन जरुरी छ।
फुटबलको बढी क्रेज भएको पोखरामा आयोजकको अपेक्षाभन्दा बढी दर्शक प्याराफिटमा भरिभराउन हुनुले के अर्थ दिएको हो?
हामीले पहिलो संस्करणमा यहाँका दर्शकमा क्रिकेटप्रतिको स्नेह जगाउँन टिकटको व्यवस्था गरेका थिएनौं।टिकटको व्यवस्था नगर्नुपछिको कारण पनि यहाँका स्थानियलाई क्रिकेट हेर्न आईदिनुस है भन्ने हाम्रो सन्देश थियो। खेलका हरेक दिन प्याराफिट भरिएका थिए। फाइनलमा त झन प्याराफिट बाहिरभित्र दर्शकहरु ठूलो संख्यामा सभ्य रुपमा खेल हेर्न आइदिनु भयो। पोखरामा विशेषतः फुटबलको लोकप्रियता छ भन्ने थियो तर प्रतियोगिताले क्रिकेटको पनि लोकप्रियता छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदिएको छ।
यो पनि: पीपीएलमा दर्शकः ८ वर्षे नातिदेखि ८१ वर्षे हजुरबुबासम्म
पोखरामा पीपीएलको तयारी सुरु गर्दा कस्ता खालका चुनौती थिए?
नयाँ भेन्यु तयार गर्न सुरुका दिनमा चुनौती नै थियो। हामीले तीनमहिना अघिबाट काम थाल्दा यो मैदान जंगल थियो, पीचको कुनै आकार नै थिएन्। सबैकुरा सुरुवातबाट नै सुरु गर्नुपर्ने थियो। तीनमहिना र अहिले हेर्दा मैदानको कायापलट नै भएको छ। आउटफिल्ड सुन्दर देखिएको छ। स्पाइक लाएर मिल्ने पीचहरु बनेका छन्। सुरुमा त हामीले यहाँ भएको झाडीहरु फाड्ने काम गर्यौ। ग्रेडर, रोलर ल्याएर मैदानको लेभलिङ गर्ने काम गर्यौ। त्यसपछि गहिरो भागमा फिलिङ गयौं।
यो पनि: दीपेन्द्रको ‘वेल डन’ फिनिसिङको कथा
चुनौतीलाई मैले अवसरका रुपमा लिने गरेको छु। चुनौती छन् भनेर रोक्ने कुरा भएन। चुनौतीलाई अवसरका रुपमा लिने हो। जतिपनि चुनौतीहरु आए। तिनीहरुलाई हामीले एकदमै सकरात्मक नतिजामा बदल्यौं। त्यही सकरात्मक नतिजाको परिणाम आज सफलता पूर्वक प्रतियोगिता सम्पन्न गरेका छौं।
प्रतियोगिता अवधिहरु पीचको निकै प्रशंशा सुनियो? के के गर्नु भयो यतिको पीच निर्माणका लागि?
पीचका लागि मुम्बईबाट हामीले सन्तोष भन्ने क्युरेटर ल्याएका थियौं यस्तै कीर्तिपुर काठमाडौंबाट हामीले चारजना ग्राउण्ड स्टाफहरु ल्यायौं। यस्तै पोखराका स्थानिय क्युरेटर प्रदीप रावतको टिमले चौबिसै घण्टा खटिएर काम गर्नुभएको छ। प्रतियोगिताका लागि बनेको पीचलाई सबै स्वदेशी तथा विदेशी खेलाडीहरुले देशमा भएका मध्ये अहिलेसम्मकै राम्रो पीच छ भनेर भन्या छ। काठमाडौं पनि स्पाइक लाएर खेलेको यो पहिलो पीच हो।
पोखरामा पीपीएल गर्ने अवधारणा चाहीँ तपाईको दिमागमा कसरी आएको थियो?
म क्रिकेट संघमा काम गर्दा खेरि नै बोर्डमा धेरै समस्याहरु हुन्थ्यो। योजना बन्थ्यो, कार्यान्वयन हुन्थेन। म क्रिकेट संघमा गएपछि क्रिकेटमा केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो। त्यहीबीच डीपीएल(धनगढी प्रिमियर लिग), इपीएल(एभरेष्ट प्रिमियर लिग) जस्ता लिगहरु भैरहेका थिए। त्यसमा पनि मैले आफूले सक्दो सहयोग गरिरहेको थिए। ६ महिनाअघि लिग गर्ने कन्सेप्ट मेरो दिमागमा आएको हो। कहाँ गर्ने भन्दा पोखरामा नेचुरल ब्युटी र न्युट्रल भेन्युको प्रर्याप्त सम्भावना रहेकाले यहाँ गर्दा अझै राम्रो हुन्छ भनेपछि पोखरा गर्ने निर्णय भएको हो।
यो पनि: टुलुटुलु हेर्छन् महिला क्रिकेटर
नेपाली क्रिकेटको विकिन्द्रीकरणमा पीपीएलको भुमिका कत्तिको रह्यो?
क्रिकेटलाई विकेन्द्रीत गर्नुपर्छ। जसरी धनगढी प्रिमियर लिग(डीपीएल)ले राम्रो सुरुवात गर्यो। आज धनगढी क्रिकेटको शहर भनेर चिनिन्छ। आज हामीले पोखरामा क्रिकेट ल्याएका छौं। अझै देशका अरु शहरहरुमा पनि क्रिकेट ल्याउन सकियो भने क्रिकेटको विकास चाडो हुन्छ। पीपीएलको विकास भने ग्रास रुट लेभलको क्रिकेट विकास हो। क्रिकेटमा व्यवसायिकता हासिल गर्नु हो।
पोखरामा मौसम राम्रो छ। फेवाताल, हिमाल, नेचुरल व्युटी, खेलाडी तथा अफिसियलका लागि सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरु छन्। क्रिकेट फुटबलजस्तो एकदुई घण्टा खेलेरमात्रै हुदैँन। कम्तिमा चारपाँच घण्टा खेल्नुपर्छ। खेलाडीहरुलाई रिल्याक्स गर्ने ठाउँ पनि पोखरामा प्रशस्त छ। यस्ता ठाउँहरु देशका अन्य ठाउँमा पनि छन्, त्यहाँ पनि व्यवसायिक प्रतियोगिताहरु आयोजना गर्न थाल्नुपर्छ।
क्विन्स इभेन्ट्सको भावी योजना के छ?
भर्खरै पीपीएल भव्यताका साथ सम्पन्न गरौं। आगामी दिनमा क्रिकेटमा मात्रै नभएर सम्पूर्ण स्पोर्टसमा नै काम गर्ने योजना छ। आगामी योजनाहरु चाहीँ हामी बनाई राखेका छौं। चाडैँ ती कुराहरु अघि बढाउँदै सम्पूर्र्णलाई जानकारी दिने नै छौं। त्यसका लागि पीपीएलको आगामी संस्करण अझै ठूलो स्केलमा हुने प्रतिबद्धता जनाउँछु।
यो पनि: पोखरामा पोखिएको इंग्ल्याण्डको अनुभव
यो पनि: पोखरा क्रिकेटमा ‘ब्रेक थ्रु’को अाशा
प्रकाशित २१ कार्तिक २०७५, बुधबार | 2018-11-07 09:32:50